Raspberry Pi Pico: ilay SBC vaovao mihena sy mora vidy. Avy amin'ny Linux
Raspberry Pi Foundation dia namoaka vokatra vaovao. Momba ny Raspberry Pi Pico, SBC mora vidy vaovao izay manatevin-daharana ireo efa misy. Miaraka amin'izany, hamafisina ny tolotra ankehitriny, miaraka amin'ny Raspberry Pi 4 sy Pi Zero, na Pi 400. Ankehitriny, ny endrika vaovao dia mihena ny habeny, ary misy vidiny tena mahagaga: manodidina ny $ 4.
Amin'ity tranga ity dia a MCU na microcontroller, vahaolana tsotra sy mihena hampihatra izay ilaina rehetra hampandehanana rafitra miharo ary hampiharana izany amin'ireo tetikasa izay manan-danja ny habe sy ny fanjifana, toy ny tetikasa ara-pitsaboana, ny fiara, ny indostria, ny robotika, ny tobin'ny toetr'andro, sns.
Mety hieritreritra ianao fa tsy vaovao tsara izany, ary marina fa efa misy takelaka mihena sahala amin'izany. Fa ny vaovao tsara kosa dia hafa. ny Raspberry Pi Foundation dia namonjy tsy nampoizina. Ary sendra mpamorona endrika tsy manam-paharoa amin'ny chip-tenany izy, toa ny SoC izay ampidiriny ao amin'ny Raspberry Pi Pico.
SoC iray namboarin'izy ireo ary notononina araka ny anarany RP2040. Ireo cores fanodinana dia tsy natao ho an'ny namboarina, fa nifantina ireo core manana fahazoan-dàlana ho an'i Arm izahay. Manokana, roa ARM Cortex M0 + cores amin'ny 133Mhz no nampiharina. Miaraka amin'izy ireo, 264 KB RAM sy fitehirizana flash 2MB no nampiharina, ary koa singa iray PIO (Programmable I / O) haka tahaka ny interface toa ny karatra SD, VGA, sns.
Mitandrema! Satria tsy lasa MDI nandritra ny alina izy ireo, araka ny asehon'ny haino aman-jery hafa mihaja. Averiko ihany fa tsy misy dikany izany, mametra ny tenany fotsiny izy ireo amin'ny famolavolana fa tsy amin'ny famokarana. Raha ny marina, ny puce Raspberry Pi Pico dia amboarina ao amin'ny Fitrandrahana TSMC, miaraka amin'ny teboka 40nm. Ary tsy maintsy hojerentsika raha fironana ho an'ny SoC ho avy io, na raha zavatra voafaritra fotsiny izany ary hanohy hampiasa ny Broadcom ...
Raha ny fanazavana, teknolojia iray an'ny litera misy datyEny, saingy tsy mila bebe kokoa na omena ireo fiasa tsotra an'ity puce ity. Ho an'ny zavatra namboarina dia mihoatra ny mahafeno azy io.
Raha ny rafitra fandidiana, ny marina dia tsy ho afaka hametraka Linux ianao na hafa, toy ny amin'ny SBC hafa. Tsia, eto dia azonao atao ny mampiditra programa fotsiny mba hampandeha azy. Izany hoe, amin'io lafiny io dia mitovy amin'ny tabilao Arduino kokoa izy io.
Azonao atao ny manoratra sketsa amin'ny fiteny fandaharana toa C na MicroPython ao anaty PC ary ampidiro amin'ny microUSB amin'ny fahatsiarovana ny Raspberry Pi Pico anao. Noho izany, ny microcontroller dia afaka manatanteraka azy ireo ary manao asa amin'ny tsimatra GPIO.
Mazava ho azy fa aza manantena tombony lehibe. Dia a takelaka voafetra satria mifantoka amina karazana fampiharana manokana izy io. Ankoatry ny tsy fahafahanao mametraka OS dia hahita lesoka ihany koa ianao amin'ny resaka fifandraisana tsy misy tariby noho ny habeny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Raspberry Pi Pico: ilay SBC vaovao manify sy mora vidy